Imaradka oo Si Rasmi ah uga hadlay Lacag lagu qabtay Garoonka Muqdisho – Radio Daljir
Imaradka oo Si Rasmi ah uga hadlay Lacag lagu qabtay Garoonka Muqdisho
Abriil 10, 2018 5:54 g 0
Qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibada ee Dowladda Imaraadka carabta ayaa si kulul loogu cambaareeyay tallaabadii dowlada federaalka Soomaaliya kula wareegtay lacag maalaayin ah oo lagu qabtay Garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde ee Muqdisho.
Imaraadku waxay sheegeen in lacagtaasi ay gaaraysay 9.6 milyan dollar oo loogu talagalay mushaharka ciidamada Soomaaliya ee imaraadku tababareen ee ku sugan magaaladda Muqdisho.
Imaraadku waxay kaloo sheegeen in ciidamada garoonku ay qoryo ku qabateen qaar ka mid ah dadkii saarnaan diyaaradda lacagta siday, islamarkaana tallaabada ay dowladda Federaalku qaadeena ee ay kula wareegeen lacagta ay dhaawacayso xiriirka labada dowladood.
“ Ficilkan waa mid sharci darro ah, wuxuu lidi ku yahay xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Imaraadka, wuxuuna khatar gelinayaa heshiiska is-afgaradka ee labad dowladood” sidaas waxaa lagu yiri qoraalka wasaaradda Arimaha dibadda.
Qoraalka waxaa sidoo kale lagu xusay in dowladda Imaraadka Carabtu ayaa kaalmooyin dhaqaale siiso Soomaaliya oo dhinacyada ciidamada, Siyaasadda, Dhaqaalaha iyo gargaarka bani’aadanimo
Imaraadku waxay tababaraan iyo taakulayn dhaqaale siiyaan ciidamada Badda Puntland ee PMPF, waxay kaloo taakuleeyaan ciidamo federaalka ee fadhigoodu yahay magaaladda Muqdisho.